xow: mpandrindra Linux an'ny Xbox One Controller | Avy amin'ny Linux
Raha tianao ny milalao ary ianao dia iray amin'ireo maniry ny hampiasa ny fifehezana Xbox One ho an'ny lalaoo, dia hahaliana anao izany. Ilay Controller Microsoft fanta-daza, ny Xbox One Controller, dia manana mpamily Linux mahaliana antsoina hoe xow. Ity tetik'asa ity dia mikendry ny hampiditra fanohanana amin'ireo kinova sy maodely marobe an'ny mpanara-maso lalao. Ankehitriny ianao dia afaka mampiasa ny kinova farany navoaka, xow 0.3.
Na dia mbola mpamily tanora aza izy dia ny marina dia mandeha tsara ary isaky ny miditra endri-javatra bebe kokoa. Tamin'ny famoahana farany dia nampidirina avokoa ireo fiasa feno, ao anatin'izany ny fibaikoana ny baiko, ny fitsipika udev mba tsy hitaky tombon-tsoa amin'ny faka, nampiana tanjona vaovao ho an'ny fanamboarana ihany koa mba hahafahana mamongotra azy mora kokoa, manohana ny Xbox Mpibaiko Elite iray, sns.
xow koa dia nanana asa tsara hatramin'ny mpamorona azy hatramin'ny manitsy olana sasany izay nananany tamin'ny kinova taloha. Ohatra, ny kinova 0.3 dia tsy hiteraka olana tsy mifanaraka intsony amin'ny mpamily Linux kernel mt76, izany hoe ny mpamily ho an'ny tamba-jotra tsy misy tambajotra ho an'ny fitaovana MediaTek. Toy izany koa, ny olana mianjera rehefa tapaka ny dongle mandritra ny fiarahany dia raikitra.
Raha ny voalazan'ireo izay efa nanandrana dia mandeha tsara io, na dia amin'ny maody tsy misy tariby ho an'ny Controller Xbox One Controller an'ny maodely 1697, 1698 ary 1708. Izany dia manonitra ny tsy fisian'ny fanohanana ofisialy ny sehatra Linux izay manana an'ity karazana mpanera ity, ary azo atao izany noho ny asan'ny mpamorona. Ka afaka mankafy ny lalao video-dry zareo amin'ny fomba tsotra kokoa ny Gamers.
Raha liana amin'ny xow ianao dia azonao atao eto tsidiho ny tranonkalany GitHub, azonao andramana izany ary jereo ny fomba fiasan'izy io, ary koa ny fanampiana raha mahita olana ianao. Na dia tadidio aza fa mbola eo am-piandohan'ny dingana ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » xow: mpibaiko Linux an'ny Controller Xbox One